स्याङ्गजामा मुल्य बृद्धिको मारमा उपभोक्ता – Tulsimedia
स्याङ्गजामा मुल्य बृद्धिको मारमा उपभोक्ता
२०७७ बैशाख १६, पोखरा
हुम बहादुर च्हाक्ली तमु
स्याङ्गजाको विरुवा गाउँपालिका भित्र रहेका साना तथा ठुला व्यापारीहरुले लकडाउनको भरपुर फाइदा उठाउदै सोझा उपभोक्ताहरु ठगिरहेको छन् । उपभोक्ताले सदाको भन्दा बढी मुल्यमा तिरेर खरिद गरिरहेको छ । सदरमुकाम स्याङ्गजा बजारदेखी करिव १७ किलोमिटरको दुरीमा विरुवा गाउँपालिका रहेको छ । धुवानीको लागी इन्धनको मुल्य घटेको तथा सडकमा सहजै धुवानी गरिन्छ ।
विरुवा गाउँपालिका वडा नं.–२, अर्चले भञ्ज्याङ्ग तथा विरुवा गाउँपालिकामा सदरमुकाम भन्दा अधिक मुल्यमा अति आवश्यक सामाग्रीहरु विक्रि गरिरहेको छ ।
विरुवा गा.पा.–२, अर्चले भञ्ज्याङ्गमा रिचार्ज कार्ड = ११०, प्रति के.जी. गोलभेडा = ९०, प्याज = १००, तेल = २००, चिनि = १००, दाल = १४०, चना = १४०, नुन = ३०, अण्डा = ३८० (प्रति क्यारेट) तथा अन्य खाद्यान्नको मुल्य यसरी नै बढाइएको छ ।
विरुवा बजारमा प्याज = ७०, तेल = १९०, आलु = ५५, करेला = १४०, गोलभेडा = ७०, स्याउ
= ३५०, भेन्टा = ८०, अण्डा = ३२० (प्रति क्यारेट) रहेको छ ।
स्याङ्गजा बजारमा रिचार्ज कार्ड = १००, गोलभेडा = ६०, प्याज ५५, तेल = १७०, चिनी, ८०, दाल = १००, चना = ११०, नुन = २० रहेको छ । त्यस्तै अरु अत्यावसेक सामाग्रीहरु एवंम् रितले बृद्धि गरिरहेको छ ।
जुन सुचना सम्बन्धित निकाय वडा कायालय तथा पालिकालाई जानकारी गरिएतापनि कुनै अनुगमन गरिएको छैन । खुलेआम रुपमा उपभोक्ताहरुलाई ठगिरहेको छ । यो कार्य प्रति स्थानिय अति नै असन्तुष्ट तथा त्यहाका युवा हरु आक्रोसित भएको छन् । त्यस्तै कोरोना राहात वितरण अभियानमा पनि अनियमितता र गरिब तथा मज्दुर वर्गहरुले राहात नपाएको जनगुनासो गरिरहेका कुरा सम्बन्धित स्थानियहरुले जानकारी गराएका थिए ।
स्याङ्गजामा लकडाउन फितलो, मानिसहरु बाहिर
बज्र लाई कोरोना लागेपछी घरपरिवारको बिचल्ली ,गाउँमा रुवाबासी (हेर्नुहोस भिडियो )
गण्डकी बिकास बैंक लि. हेम्जा शाखाद्वारा कम्प्युटर हस्तान्तरण